Mampandeha sy manonta maimaimpoana ireo pejy fandokoana fandihizana
Pejy fandokoana fandihizana
Pejy tokana amin'ny lohahevitry ny dihy
Na izany aza, zava-dehibe foana ny pejy fandokoana atolotra dia natao ho an'ny ankizy. Satria ny sary fandokoana mifanaraka amin'ny taonany sy ny antony tsara mety hahatonga ny ankizy ho vonona hirotsaka amin'ny fandokoana. Ary eo indrindra no nidiran'ny fanoloranay ho an'ny pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy. Ny tsindry eo amin'ny rohy iray dia manokatra ny pejy topy:
Tsy azontsika atao ny mameno ny dihy rehetra amin'ny sokajy misy azy avy. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ilay pejy miaraka amina modely fandokoana voafantina:
Mandihy - dihy an-dalambe
Mandihiza toy ny kintana pop
Mandihy ny ray aman-dreny
Mandihy amin'ny orana
Mandihy pejy fandokoana
Baleta fandihizana pejy fandokoana